 Ọ bụ nꞌihi nke a ka m ji na-agwa unu sị, gbaaranụ mmehie ịkwa iko ọsọ. Ọ dịghị mmehie ọzọ na-emekụta anụ ahụ mmadụ dị ka mmehie ịkwa iko. Ọ bụ mmehie mmadụ na-eme megide anụ ahụ ya. Ọ bụ na unu amataghị na ahụ unu bụ ụlọ obibi nke Mmụọ Nsọ ahụ Chineke nyere unu, Onye bi nꞌime unu? Anụ ahụ unu abụkwaghị nke unu onwe unu, kama unu bụ nke Chineke. Chineke jikwa ihe dị oke ọnụ ahịa zụpụta unu. Ya mere jirinụ anụ ahụ unu nye Chineke otuto.
Otu aha ka e dere nꞌelu uwe ya na nꞌelu apata ya. Ọ bụ, Eze ndị eze nile, na Onyenwe ndị nwe mmadụ nile.
 Ọ bụ ezie na anyị nwere ike ime ihe nile, dị ka iri nri e ji chụọra arụsị aja, ma ọ bụghị ihe nile dị mma omume. Anyị nwekwara ike ime ihe nile, ma ọ bụghị ihe nile nwere ike inyere anyị aka. Ka anyị hapụ ịchọ ọdịmma nke anyị nanị, kama anyị ga na-achọ ọdịmma nke ndị ọzọ, ime ihe ga-enyere ha aka. Nke a bụ ihe i kwesịrị ime. Ọ bụrụ na ị gaa ahịa, zụrụ ụdị anụ ọ bụla ị chọrọ nke a na-ere nꞌahịa, ajụla ajụjụ ọ bụla ịmata ma e ji ya chụọra arụsị aja ma ọ dịghị, nꞌihi na ọsịsa ị ga-anata pụrụ iwute mmụọ gị. Nꞌihi na akwụkwọ nsọ kwuru sị, “Ụwa nile na ihe ọma nile dị nꞌime ya bụ nke Chineke. Ọ dịkwara anyị iji ha ime onwe anyị obi ụtọ.” Ọ bụrụ na onye na-ekweghị ekwe akpọọ gị, sị gị bịa nꞌụlọ ya, gaa, riekwa nri ọ bụla e nyere gị na-ajụghị ajụjụ. Nꞌihi na ọsịsa ya pụrụ imerụ mmụọ gị. Ma ọ bụrụ na e nwee onye gwara gị sị, “E jikwa anụ a chụọra arụsị aja” erila ya, nꞌihi nwoke ahụ gwara gị na e ji ya chụọ aja, na nꞌihi na ọ ga-ewute mmụọ ya ma i rie ya. Nꞌoge a ihe dị mkpa abụghị ihe i chere banyere anụ ahụ, kama ihe dị mkpa bụ ime ka mmụọ nwoke ahụ gwara gị na e ji ya chụọra arụsị aja hapụ ịda mba. I nwere ike ịjụ ajụjụ sị, “Gịnị mere m ga-eji hapụ ime ihe ọ bụla nꞌihi na ọ ga-ewute mmụọ onye ọzọ? Ọ bụrụ na m nwere ike kelee Chineke ekele nꞌihi ya, were nri m rie, olee otu o si gbasa onye bịara ịjụ m ọnụ?” Ka m gwa gị ihe mere o ji dị mkpa. I kwesịrị ime ihe ọ bụla ị na-eme, ma ọ bụ iri nri ma ọ bụ ịṅụ ihe ọṅụṅụ, i kwesịrị ime ihe nile nꞌụzọ ọ ga-esi wetara Chineke otuto.